भुटानद्वारा प्रधानमन्त्री मोदीलाई आफ्नो सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान
भारत र भुटान बीच एक अद्वितीय र समय परीक्षण द्विपक्षीय सम्बन्ध स्थापित
प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई शुक्रबार भुटानको सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार अर्डर अफ द ड्रुक ग्याल्पोका लागि नामाङ्कन गरिएको छ। उनले महामारीको समयमा हिमालय राष्ट्रलाई निःशर्त मित्रता र सहयोग विस्तार गरेका थिए।
भुटानका प्रधानमन्त्री डा. लोटे छिरिङले ट्वीटरमा प्रधानमन्त्री मोदीलाई राष्ट्रको सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान गरेकोमा खुशी व्यक्त गर्नुभएको छ ।
"महामहिमले नरेन्द्र मोदीको नाम सर्वोच्च नागरिक सम्मान, अर्डर अफ द ड्रुक ग्याल्पोको लागि नामाङ्कन गरेको सुन्दा धेरै खुसी लागेको छ," उनले ट्वीटर पोस्टमा भने।
भुटानी प्रधानमन्त्रीले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले विगतका वर्षहरूमा र विशेष गरी महामारीको समयमा हिमाली राष्ट्रलाई प्रदान गरेको निःशर्त मित्रता र समर्थनलाई भुटानी राजाले महत्व दिनुभएको र यो योग्य रहेको बताएका छन्।
"एचएमले मोदीजीलाई महामारीको समयमा विस्तारित नीशर्त मित्रता र समर्थनलाई महत्व दिनुभएको छ।,"
"धेरै योग्य! भुटानका जनता‌का तर्फबाट बधाई छ। महामहिमलाई एक महान, आध्यात्मिक मानवको रूपमा देखेका छौं। व्यक्तिगत रूपमा सम्मान प्रदान गर्न तत्पर छु, "।
भारत र भुटान एक अद्वितीय र समय परीक्षित द्विपक्षीय सम्बन्ध साझा गर्दछ। दुई देश बीच, अत्यधिक विश्वास, सद्भावना र पारस्परिक समझदारी रहेको छ।
भारत र भुटान बीच पारस्परिक रूपमा लाभदायक आर्थिक अन्तरसम्बन्ध द्विपक्षीय सम्बन्धमा महत्त्वपूर्ण तत्व भएको छ।
सन् २०१८ मा भारत र भुटानबीच औपचारिक कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको स्वर्ण जयन्ती मनाइएको थियो।
भारत भुटानको सबैभन्दा ठूलो व्यापार र विकास साझेदार हो। भारतले देशका धेरै विकास परियोजनाहरूमा आफ्नो सहयोग विस्तार गरेको छ। जस्तो १ हजार २० मेगावाटको ताला जलविद्युत परियोजना, पारो विमानस्थल, र भुटान प्रसारण स्टेशन।
दुई देशबीच नियमित उच्चस्तरीय भ्रमण र संवादको परम्पराले विशेष सम्बन्धलाई कायम राखेको छ ।
प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा मोदीले सन् २०१४ र सन् २०१९ मा दुई पटक भुटानको भ्रमण गरेका थिए। हिमाली राष्ट्र भुटानको अन्तिम भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री मोदीले राज्यसँग जलविद्युत क्षेत्रबाट साझेदारीलाई विविधीकरण गर्न र अन्तरिक्षमा व्यापार र सम्बन्ध विस्तार गर्न इच्छा व्यक्त गरेका थिए।
यसबाहेक, भारत को खोप मैत्री पहल अन्तर्गत कोविशिल्ड खोप प्राप्त गर्ने पहिलो देश थियो। जनवरी महिनामा उपहार स्वरुप भुटानले डेढ लाख कोभिशिल्ड खोप प्राप्त गरेको थियो।
पछि, भारतले महामारी विरुद्ध राष्ट्रिय खोपको लागि अनुमति दिँदै, हिमाली देशमा कोभिड-१९ खोपको थप ४ लाख डोज पठाएको थियो।
भुटानका प्रधानमन्त्री लोटे छिरिङले यी दयालु कार्यहरू भारतीय जनताका लागि अनन्त आशीर्वादको रूपमा विकसित होस् भनी प्रार्थना गरेर कृतज्ञता व्यक्त गरेका थिए।